China Ifowuni Anti-zelanga Pad Mat mveliso kunye nabenzi | SJJ
Iphedi yokutshixeka okanye imethi inokugcina ifowuni yakho ephathekayo, iiglasi zelanga, izitshixo kunye nezinye izinto kwideshibhodi yemoto yakho ngaphandle kokutyibilika xa uqhuba. Ungayisebenzisa ekhitshini lakho, kwigumbi lokuhlambela naseofisini ukugcina izinto zihleli. Sisipho esifanelekileyo sokunyusa, ipremiyamu, intengiso, isikhumbuzo ...
Iphedi yokutshixeka okanye imethi inokugcina ifowuni yakho ephathekayo, iiglasi zelanga, izitshixo kunye nezinye izinto kwideshibhodi yemoto yakho ngaphandle kokutyibilika xa uqhuba. Ungayisebenzisa ekhitshini lakho, kwigumbi lokuhlambela naseofisini ukugcina izinto zihleli. Sisipho esifanelekileyo sokunyusa, ipremiyamu, intengiso, isikhumbuzo, izixhobo zemoto kunye nokuhombisa. Ikwanokusetyenziswa njenge-coaster okanye i-debris pad ekhaya, eofisini, okanye esikolweni.
Yenziwe nge-PU Gel kunye ne-PVC ethambileyo engenatyhefu
Ngobunkunkqele obomeleleyo obunamandla, isiliphu sokulwa nesothuthi
Easy ukusebenzisa, akukho ngcina okanye umazibuthe ezifunekayo
Iyasebenza, iyasuswa, iyahlambeka kwaye iyaphatheka
Egqithileyo Ukuma kweefowuni kunye nabaphathi beKhadi
Okulandelayo: Ifowuni ebuyela umva